श्रीपेच लगाउन र गद्दीमा बस्न नपाउने नेपालको पहिलो राजा बनेका दीपेन्द्र बाँचेका भए कस्ता राजा हुन्थे? – Classic Khabar
July 3, 2021 242
दरबार ह’त्याका’ण्ड भएको ४ दिन भइसकेको थियो। जसमा मा’रिए’का राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, अधिराजकुमारी श्रुति, अधिराजकुमार निराजनलगायतको दाहसंस्कार गरिएको पनि ३ दिन बितिसकेको थियो। छाउनीस्थित सैनिक अस्पतालको अपरेसन थिएटरबाट २२ जेठ (२०५८) बिहानै अर्का एक जनाको शव निकालियो। श्रद्धाञ्जलिका लागि अस्पताल परिसरको पालमुनि राखियो।
एउटा अनुमान गरौं, दरबार ह;त्याका;ण्डमा बाबुआमा, भाइबहिनीसहित १० जनाको ह’ ‘त्या आ’रोप लागेका दीपेन्द्र बाँचेका भए यतिबेला के गरिरहेका हुन्थे होलान्? उत्तर : १३ असार (०२८) मा जन्मेका दीपेन्द्र यतिबेला ५०औं जन्मोत्सव मनाइरहेका हुन्थे। सम्भवतः राजा पनि रहिरहेकै हुन्थे कि?
Prevचियावाली र गजेन्द्र,सन्तोषी सुब्बाको बुवालाई भेट्न डेरामा जादा रोकिएन आशु, कती दुख सहेर बाचेका छन (भिडियो हेर्नुहोस)
Nextजनता निराश छन् भन्दै जन्मदिन नमनाउने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जारी गरे यस्तो विज्ञप्ति